सेञ्चुरी बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले खुलाए २६० भन्दा बढीलाई जागिर  BikashNews
सेञ्चुरी बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले खुलाए २६० भन्दा बढीलाई जागिर
२०७४ फागुन ६ गते ८:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । तपाई जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? तपाईसंग अनुभव र क्षमता भएर पनि बेरोजगार बस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस दुई बैंकले २६० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भएका छन् ।
शाखा विस्तारका लागि दुई बैंकले विभिन्न पदका लागि २६० जना भन्दा बढीलाई आइतबार जागिर खुलाएका छन् । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले शाखा प्रवन्धकदेखि ट्रेनी समेतलाई गरी रोजगारी खुलाएका हुन् । सेञ्चुरीले विभिन्न तहका लागि २१४ र महालक्ष्मीले पनि ५० जनाको हारहारीमा जागिर खुलाएका छन् ।
सेन्चुरीले सहायक प्रवन्धक २, वरिष्ठ अधिकृत १३, अधिकृत २३, सहायक अधिकृत ३६, सुपरभाइजर १८, वरिष्ठ सहायक २४ सहायक अपरेसन इनचार्ज ४, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १९ र ट्रेनी सहायक ७५ जना नियुक्त गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
सहायक ट्रेनी राजधानी र बाहिर पनि जानुपर्ने छ । दरखास्त मेरो जव डटकममा दिनुपर्ने छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति फागुन १३ गतेलाई तोकिएको छ ।
यस्तै महालक्ष्मीले केही शाखा प्रवन्धक र सुपरभाइजरका लागि दरखास्त मागेको छ । यस्तै बैंकस्योरेन्स अधिकृत १ जना, बजार अधिकृत १, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २०, जुनियर सहायक केही र कार्यलय सचिव गरी झण्डै ५० जनाका लागि दरखास्त खुलाएको बैंकले जनाएको छ ।
दरखास्त दिने अन्तिम मिति आउदो मार्च ४ गतेसम्म तोकिएको छ । काठमाडौं र उपत्यका बाहिर दुर्गम जिल्लाका लागि जागिर खुलाएको हो । अनुभवीलाई प्राथमिकता दिएको बैंकले जनाएको छ ।
डिसेम्बर २३ देखि काठमाडौंमा मानव स्रोतको रुपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलन हुँदै
विद्युत प्राधिकरणका हैटौडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका १० वटा शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरूवाका लागि छुट्टै भवन बन्ने, ६ करोड २ लाखकाे लागत
मेगा बैंकले ल्यायो थ्रीडी सेक्योर प्रविधि, अनलाइन कारोबार थप सुरक्षित हुने
अष्ट्रेलियन एयरलाइन्सहरुमा ह्यान्डब्यागकाे ताैल ताेकियाे, ७ किलाे भन्दा बढीकाे सामान बाेक्न नपाइने
१४१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि, मिर्मिरे लघुवित्तका लगानीकर्ताले कमाए सबैभन्दा बढी
आइतबारदेखि सार्वजनिक सवारीमा नयाँ नियम, ११ रूटका बसले यात्रुलाई नकुर्ने
बैंकका सञ्चालकलाई बैठक भत्ता ३० हजार, सञ्चार खर्च ४ लाख ८० हजार र स्वास्थ्य बीमा करोड माथि
अष्ट्रेलियाबाट ९६ हजार आप्रवासी विद्यार्थी निकालिए, नेपाली विद्यार्थीको अवस्था कस्तो ?
कर्जाको व्याजमा हस्तक्षेप जरुरी छ, निक्षेपको व्याजमा होइन
३०० जना सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको विज्ञापन खुल्दै, प्रशासनतर्फ भने नखुल्ने पक्का
MD/Chief Editor: Ramkrishna Paudel